Siyaasaa - - Page 22
Tokkoomanii wajjin qabsaa’uun hunda caalaa fi murteessaadha
Abdii Boruutiin Walitti dhufanii waliin haasa’uun gaarii dha; waliigaltee uumanii wajjin hojjechuun caalaa dha; tokkoomanii waliin qabsaa’uun ammoo hunda caalaa fi murteessaa dha; …
Eenyutu eenyu eega, eenyutu eenyurraa waa eega?
Abdii Boruutiin “Uummanni Oromoo si eega; ati ammoo sagalee isaa ta’uu qabda. Ani nama tokko waanan ta’eef, hiriira irratti argamus argamuu baadhus homaa …
Oromoo ta’ee kan kana hin hubanne, ani Oromoo dha ofiin jechuunuu mamsiisaa dha
Abdii Boruutiin Oromoon bilisummaa ni barbaada moo hin barbaadu? jedhee otuun gaafii kana dhiyeessee, deebii lama argachuu nan danda’a jedhen yaada. Tokko, eeyyen …
Tokkummaan Oromummaa kan bilisummaa dhaaf ijaaramu, tokkummaa sobaa ta’uu hin danda’u
Abdii Boruutiin Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBO) akka galii hin geenye gufuu itti ta’uu dhaaf; yoo danda’ame sirumaa dhabamsiisuu dhaaf, diinni keenya …
Rakkoolee jiraniif furmaata barbaaduuf malee, tokkummaa gaafii keessa galchuufii miti
Abdii Boruutiin Dhiyoo kana mata duree “Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti, qabsoon hidhannoo hammam abdachiisaa dha?”jedhu jalatti barruu tokko dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Wantin barruu sana …
Kaayyoon Oromoo bilisummaa fi abbaabiyyummaa dhabe deebisee argachuuf malee..
Abdii Boruutiin Oromoorraa dhaladheef otuu hin taaane, wanti dhugaa ta’e fi ibsuu barbaadu, uummanni keenya (Oromoon) dhalootaan ykn uumaa dhaan daba waan beeku …
Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti, qabsoon hidhannoo hammam abdachiisaa dha?
Abdii Boruutiin Seenaa biyyoota gara garaa kan gabrummaa jala turani fi bilisummaa argatan yoo ilaalle, qabsoo bilisummaa isaanii keessatti qabsoon hidhannoo bakka guddaa akka …
Tokkummaan uummanni Oromoo barbaadu tokkummaa dirqamaa kan kaayyoo tokkorratti bu’ureeffamu dha
Abdii Boruutiin Qbsoon bilisummaa Oromoo (QBO) barbaachisaa kan ta’e fi ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaawwaman lubbuu isaanii kana keessatti kan dhaban, uummanni ykn sabni keenya …
Oromummaan kan walii fi dura dhufu yoo ta’u, amantiin garuu kan dhuunfaa fi booda dhufu dha
Abdii Boruutiin Mata duree kanaan barruu kiyya kan har’aa otuun hin jalqabin, duraan dursee gammachuu natti dhaga’amen ibsuu barbaada. Waaqayyo/Rabbi galanni haa ga’u, oduu gaariin …
Yoo ijoolleen isaa waliigalan, Oromoon akka dafee bilisoomu mamiin ykn shakkiin hin jiru
Abdii Boruutiin Akkan raadiyoonii sagalee Oromiyaa irraa dhagayetti, tokkummaan jaarmayoota Oromoo sadii: AWDO -Adda Walabummaa Dimokraatummaa Oromiyaa, GABUO – Gumii Adda Bilisummaa Ummata Oromiyaa fi …